Notice: Undefined index: und in include() (line 16 of /var/www/html/sites/all/themes/Creative/templates/node/node--article.tpl.php).
Notice: Trying to get property of non-object in include() (line 16 of /var/www/html/sites/all/themes/Creative/templates/node/node--article.tpl.php).
Public Access Center (PAC) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင် လျှောက်လွှာပုံစံ
Published: Nov 22 Posted Under: Place:
၁။ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် ၂၀၁၁- ၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ စ၍ Public Access Center (PAC) ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်နေသူများကို တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် အညီ လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် အား လိုင်စင်ဖြင့် ခွင့်ပြု ထုတ်ပေးပြီး ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။
၂။ (PAC) ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ လိုင်စင် အခွန်အခ နှုန်းထားများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
Workshop on Regulatory Role and Key Issue အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးရုံး အစည်း အဝေးခန်းမ၌ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၈) ရက် နေ့မှ (၉) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဆက်သွယ်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန နှင့် နော်ဝေနိုင်ငံ Norwegian Posts and Telecommunications Authority တို ့ပူးပေါင်းစီစဉ်မှုဖြင့် အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ICT လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရာတွင် လိုအပ်သော လိုင်စင်၊ ထောက်ခံချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဌာန၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ဖြေလျော့ပေးခြင်းကိစ္စ
Published: Nov 22 Posted Under: Place: နေပြည်တော်
ယခု ဖြေလျော့ ဆောင်ရွက်ပေးမည့် အစီအစဉ်
ICT ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး တက်ရောက်
၂၀၁၃ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ နေပြည်တော်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ပထမ အကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် မှု ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ဖိုရမ် တွင် နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ တိုးတက်ရေးနှင့် ကောင်းမွန်သည့် အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့် သန့်ရှင်းသောအစိုးရ ဖြစ်ပေါ်စေရေးတို့အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှ အလှူရှင်နိုင်ငံများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ အသီးသီးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာ၌ ထိရောက်သော ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများရရှိစေနိုင်ရန် ဦးစားပေးနယ်ပယ်များ သတ်မှတ်၍ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်....
Published: Mar 22 Posted Under: Place: နေပြည်တော်